Monofizisma : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Monofizisma : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 10 Jolay 2019 à 16:11
174 octets ajoutés , il y a 11 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 2 Aprily 2019 à 06:35 (hanova)
Endrika tamin'ity 10 Jolay 2019 à 16:11 ity (hanova) (esory)
Ny [[monofizisma|'''monofizisma''']] na [[Monofizisma|'''monofizitisma''']] dia firehana ao amin'ny [[Kristianisma|finoana kristiana]] mampianatra ny tsy fananan'i [[Jesosy|Kristy]], izay atao hoe koa [[Andriamanitra Zanaka|Zanaka]] na ny Teny, natioran[[Natiora (teolojia)|natiora]]<nowiki/>n'olombelona fa natioran'Andriamanitra ihany. Natelin'ny natioran'Andriamanitra ao amin'ny Zanaka ny natioran'olombelona. Noho izany dia mifanohitra amin'ny atao hoe ''[[diofizisma]]'' na ''diofizitisma'' ny monofizisma. Hatramin'izao dia mbola misy ny fiangonana kristiana izay atao hoe [[Fiangonana monofizita|monofizita]].
==== Ny zavatra notoheriny: ny nestorianisma ====
Niorina manodidina ny [[fanekem-pinoana nikeana]] ny foto-pampianarana kristiana nanjaka tamin'izay, izay nanekena ny fitoviam-pomban'ny [[Andriamanitra Ray|Ray]] sy ny [[Andriamanitra Zanaka|Zanaka]] sy ny fananan'ny Zanaka natioran'olombelona. I [[Eotikesy]], izay nanohana ny monofizisma, dia nanambara fa tsy manana afa-tsy natiora tokana ny Zanaka, dia ny natioran'ny maha [[Andriamanitra (tokana)|Andriamanitra]] azy. Notoheriny amin'izany ny [[nestorianisma]] izay fampianarana ny fananan'i Kristy persona roa, ka ny iray olombelona (i Jesosy) fa ny iray Andriamanitra (ny Teny). Izany dia nenti-nameno ny zavatra heveriny ho banga tao amin'ny [[fanekem-pinoana nikeana]] ny amin'ny natioran'i Kristy.
==== Ny fampianarany ====
Ho an'ny monofizisma dia tsy manana afa-tsy natiora tokana i Kristy, dia ny maha Andriamanitra azy. Ny samy monofizita dia misy zavatra tsy itovizany hevitra koa, dia ny amin'ny tsy mahamety lo ny vatan'i Kristy (talohan'ny nandaminan'izy ireo izany fifandirana izany talohan'ny fidiran'ny [[Arabo (olona)|Arabo]] tao Siria sy Ejipta izay ahitana azy ireo betsaka). Nanomboka tamin'ny taona 560 dia nisy andiany fahatelo nipoitra, izay nihevitra ireo persona telon'Andriamanitra ho andriamanitra telo samy hafa. Fampianaran-diso izany hoy ireo firehana kristiana hafa rehetra.
== Fanamelohan'ny konsily ny monofizisma ==
==== Ny konsily tao Kalkedona ====
Tamin'ny taona 451 dia nampanao [[konsily]] ny papa Leo I, dia ny [[konsily tao Kalkedona]] izay niezahana nampiravona ny firehana samihafa momba an'i Kristy, ka nandraikitra ny foto-pampianarana momba ny natiora roan'i Jesosy. Tsy nahafa-po ny mpomba ny monofizisma izany ka niotombo ny tsy fitovian-kevitra. Araka ny konsily tao Kalkedona dia sady Andriamanitra no olona ny Zanaka ka [[Persona (teolojia)|persona]] tokana nefa manana natiora roa izay tsy mifangaro sy tsy miova ary tsy mizara no tsy misaraka. Nohelohin'ny konsily tao Kalkedona ny monofizisma notarihin'i Eotikesy, tahaka ny [[nestorianisma]] izay nohelohin'ny [[konsily tao Efeso]] tamin'ny taona 431.
==== Ny konsily tao Konstantinopoly ====
Nanamafy ny fanamelohana ampahibemaso ny monofizisma ny [[konsily fahatelo tao Konstantinopoly]] tamin'ny taona 680.
== Fiangonana monofizita ==
Tao amin'ny Fiangonana kopta sy teo amin'ireo mpianatr'i Eotikesy avy any [[Konstantinopoly]] no tena nampatanjaka ny monofizisma. Noho izany dia napotraky ny Fiangonana Lehibe ka nisaraka taminy ireo monofizita tamin'ny taonjato faha-6.
Tamin'ny endriny atao hoe [[miafizisma]] dia ampianarin'ny [[Fiangonan'ny konsily telo]] ny monofizisma. Ireto avy ireo Fiangonana monofizita izay atao hoe koa [[Fiangonana tsy Kalkedoniana]]:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/972077"